Fpakman: Manjaro inoenderana neiyo Snap uye Flatpak mapakeji | Linux Vakapindwa muropa
Mhando mbiri dzeanotevera-chizvarwa mapakeji akatangwa muna 2015. Vakatanga kusvika zviri pamutemo vaive Flatpak, munaGunyana, nepo Snap yasvika mwedzi gare gare, asi haina kuiswa mune chero vhezheni nekutadza kusvika kuburitswa kweUbuntu 16.04 muna Kubvumbi 2016. Kune akawanda maLinux anogoverwa anoenderana nemhando idzi mapakeji uye pachave neimwezve nekukurumidza: Manjaro ichaburitsa fpakman kuzvibata.
Sezvo isu tichigona kuverenga muchinyorwa rakabudiswa mumusangano weManjaro, fpakman iri GUI (mushandisi interface software) iyo inokutendera iwe kubata Snap uye Flatpak mapakeji. Manjaro ichatanga seizvi chimwe chitoro che software kune vamwe vakaita seUbuntu Software, iyo Snap Chitoro Tsvaga kubva ku KDE. Izvi zvinobvumidza vashandisi veXfce, KDE uye GNOME vhezheni yeManjaro kuti vawane nyore nekuisa software yakadai seSpotify, Skype kana GIMP mune yavo Snap zvinyorwa kana Lollypop mune yavo Flatpak vhezheni.
fpakman, Imwe nzira yaManjaro kune Snap Store uye Discover
Chimwe chinhu chitsva chakataurwa naManjaro mune chake chinyorwa ndechekuti yazvino vhezheni vhezheni inouya nayo FreeOffice sehofisi suite nekutadza. Icho chinangwa kana uchishandisa iyo Softmaker suite ndeyekupa kwakanakisa kuenderana neMicrosoft Office. Zvimwe zvinhu zvitsva zvinowanikwa mune itsva Manjaro «Kuedzwa Kwedzidzo» ndeaya:
Mazhinji Haskell anovandudza.
Iyo Manjaro Juhraya ISOs yakagadziridzwa, kusanganisira rutsigiro rweakafanogoneswa Snap uye Flatpak mapakeji muXfce, KDE, uye GNOME.
Kubva pane izvo zvinotsanangurwa muchinyorwa chino chipfupi, zvinhu zviviri zvinofanirwa kutarisirwa. isu tiri kutaura nezve «Yekuedza Kwidziridzo», inova yeiyedzo vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu iyo yemberi shanduko dzinoedzwa; kune rimwe divi, izvozvi ivo vane chete pre-yakagadziriswa rutsigiro rwePlppak uye Snap mapakeji mune Xfce, KDE uye GNOME shanduro dzeManjaro. Chero zvazvingaitika, vazivisa shanduko huru, uye chimwe chazvo chiri chakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro ichasanganisira yemuno rutsigiro rweSpap uye Flatpak mapakeji nekutenda kuna fpakman